Quudinta baradhada inta u dhaxaysa safafka waa faa'iido marka laga eego dhinaca dhaqaalaha - Journal "Nidaamka Baradhada"
Quudinta baradhada inta u dhaxaysa safafka waa faa'iido marka laga eego dhinaca dhaqaalaha
Yaraynta xaddiga bacriminta inta lagu jiro codsiga ugu muhiimsan waxay ahayd natiijada dhaqaale ee ugu wanaagsan ee beeraha baradhada sannadkii hore. Tan waxaa caddaynaya mashruuca bandhigga ee machadka cilmi-baarista Belgian Inagro.
Inagro wuxuu bilaabay tijaabinta bacriminta Abriil 2020, isagoo diiradda saaraya jajabinta iyo bacriminta safka ah. Tijaabadu waxay bilaabatay Abriil 25 iyada oo ku saabsan dhulal leh noocyada Fontane.
Falanqaynta bilawga ah ee ciidda ka dib, waxay soo baxday in weli ay jiraan nitrogen yar oo ku jira profile, taas oo macnaheedu yahay in wadarta qadarka lagu taliyey ee nitrogen ay sareeyso: 229 kg oo nitrogen ah hektarkiiba. Dhirta kala duwan waxay heleen kaliya 70 boqolkiiba inta lagu taliyey ee bacriminta, ha ahaato berrinka ama isku xigta.
Inta lagu jiro xilliga koritaanka, farqiga u dhexeeya labada hab ee bacriminta ayaa si cad u muuqday. Tani waxay sidoo kale saamaysay dakhliga.
Dhirta aan la bacrimin ayaa lahaa wax-soosaarka ugu hooseeya. Bacriminta buuxda iyada oo aan la isticmaalin caleenta bilaha Juun/Julaay sidoo kale waxay keentay wax-soo-saar hoose, iyadoo 100% talada nitrogen ay soo saartay natiijooyin waxyar ka wanaagsan 70%.
Dhirta lagu bacrimiyey berrinka oo leh bacrin foliar ayaa lahaa wax-soo-saarka ugu sarreeya. Farqiga u dhexeeya wax-soo-saarka bacriminta isku xigta ee 70% ee caadiga ah ama 70% ee caadiga ah ee lagu kabo codsiga foliar inta lagu jiro xilliga koritaanka ma ahayn mid muhiim ah.
Cilmi-baadhayaashu waxay sheegi karaan in marka bacriminta ugu weyn lagu dabaqay safka, granules bacriminta ayaa si siman loo qaybiyay. Nitrojiin ayaa isla markiiba ku jirtay aagga xididka. Ka dib markii la bacrimiyo beerta oo dhan, waxaa jiray nitrogen aad u badan qaybta sare ee ciidda. Sababtoo ah la'aanta roob ku filan, nitrogen-kaani uma guuri karo aagga xididka.
Dhaqaale ahaan, goobta leh qadar yar oo bacriminta aasaasiga ah ee isku xigta ayaa si fiican u qabatay 2020. "Haddii aan xisaabino qiimaha 1 euro halkii kg ee nitrogen iyo qiimaha iibinta ee 80 euros halkii ton oo baradho ah, waxaan heleynaa 400 euro oo lagu daray 70 boqolkiiba bacriminta isku xigta marka la barbardhigo 100 boqolkiiba talada bacriminta gudaha." ayay cilmi-baarayaashu ku soo gabagabeeyeen.
Tags: Belgiumgelinta safafkabaradho korayabacriminta baradho
Falanqaynta ganacsiga dibedda ee Ruushka ee baradhada abuurka 2001-2019, xogta laga bilaabo Maarso 2019.
Teknolojiyada casriga ah si loo kordhiyo faa'iidada baradhada sii kordheysa